Linux yakasvika kupfuura 3% yemusika zvinoenderana StatCounter uye Net Zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Linux yakasvika kupfuura 3% yemusika zvinoenderana StatCounter uye Net Kunyorera
Kunyange zvakadaro mazuvano Linux sekureva kwekushandisa yeizvi pakati peanoshanda masystem desktop, haina chaizvo huvepo hwakawanda. Uye zviri izvo mumatanho makuru (kunyanya, StatCounter uye Net Applications), Linux ine chete 2% yemusika share kana zvishoma.
MuNet Applications, kwaive pakupera kwaJune 2016 kuti Linux yakapaza iyo 2% mucherechedzo y pakupera kwaGunyana 2017, apo uri paNetMarketShare yeNet Applications yakawanda, yaive nemugove wemusika weinenge 5% yeLinux.
Zvakanaka, zvinosuruvarisa kusvetuka kamwe kamwe kubva kuLinux yaive mhosho. Sezvo mukuru kubva kune muongorori akasimba akabvuma kuti paive nedambudziko neLinux share share. Dambudziko iri rakaonekwa rikagadziriswa mwedzi unotevera.
Sezvo kupera kwaZvita 2018, Linux yakanyoreswa mamakisi e2.78% pamambure ekushandisa mamita uye chete 1.69% paStatCounter.
Asi Linux chaizvo ine inopfuura 3% yemugove wemusika, kana isu tichifunga nezve Chrome inoshanda sisitimu.
Rangarira kuti Chrome OS isisitimu yekushandisa yakagadzirirwa neGoogle, inoenderana neLinux kernel uye inoshandisa Google Chrome webhu browser seyakanyanya mushandisi interface.
Nekuda kweizvozvo, Chrome OS inonyanya kutsigira webhu kunyorera. Asi Google's operating system yava kushandisa Linux.
Sezvo iri nehunyanzvi padyo padyo neyakajairwa kugoverwa kweLinux, inogona kutarisirwa sechikamu chemhuri iyi uye kuongorora zvakare mugove weLinux weiyo desktop inoshanda musika.
1 Inononoka asi chokwadi
1.1 Iri gore richava gore rakanaka reLinux?
Inononoka asi chokwadi
Izvo zvataurwa, mukati Net Zvishandiso, Chrome OS's 0.32% musika wemugove yakatungamira Linux kuenda ku3.1% pakupera kwaZvita 2018, nepo muStatCounter, mashandiro akanaka eGoogle sisitimu inoshanda (1.56%) inosimudzira Linux kumugove wemusika we3.25%.
Kuti uwane ruzivo, StatCounter inoyera kushandiswa kwemapuratifomu akasiyana nekuverenga iyo nhamba yemapeji anotariswa pamwedzi (muhuwandu, angangoita mabhiriyoni gumi nemashanu emapeji) neese OS, mune network yeanopfuura mamirioni maviri mawebhusaiti.
Huwandu hwavo hunopa pfungwa yemapuratifomu anonyanya kushandiswa, asi kwete hazvo mapuratifomu ane ruzhinji rwevashandisi, nekuti kushanya kunogona kunge kusingaenzanisike.
Linux inoshandiswa yakawanda zvakanyanya munharaunda yekuvandudza. Linux inove chechitatu, kuseri kweMacOS iine zvikamu zvisere kubva muzana zvemusika.
Uye Chrome OS, ingangove isipo (0.32%), kwete kare kare kubva kuLinux, sezvauri kuona mune inotevera girafu:
Kana zvakadaro Zvikumbiro zveNet, matanho matanho emusika anoenderana nedhata rakaunganidzwa kubva kumamirioni zana nemakumi masere evashanyi pamwedzi nekutarisa angangoita makumi mana emasaiti. Naizvozvo, inopa yakavimbika chiyero chemapuratifomu nevashandisi vazhinji.
MuStatCounter, tinogona kuona kuti kune 7.85% yemapeji ekuonekwa, maitiro evashanyi haana kuzivikanwa.
Mumwe anogona kufunga kuti yakawanda yeiyi muzana inogona kuverengerwa kuLinux. Rangarira, Linux inonyanya kufarirwa nevashandisi vehunyanzvi.
Uye mazhinji acho anotendeukira kumaturusi uye matekinoroji (mashandisiro evashambadzi, semuenzaniso) kudzivirira kuzivikanwa nevanoongorora kana zvimwe zvekushandisa zvekuongorora.
Iri gore richava gore rakanaka reLinux?
Pakupedzisira, sekusimudzwa kwakawanda, Nei Linux isiri kubudirira pane desktop? Kubva gore rimwe nerimwe vazhinji venyu muchanzwa Gore rino rakanaka! Kana muchokwadi hazvisi.
Uye hazvisi zvekushaya tariro kana chero chinhu, ingori Linux nekuve nebazi hombe rekugovera (imwe neimwe iine hunhu hwayo uye yakanangana nenzvimbo imwe) zvakamuomera kwazvo. Kunyanya chinhu chimwe uye icho ndechekuti haina mureza wekuparadzira pakombuta (kunyangwe iyo Kernel, pachayo ndiyo yakajairwa)
Kunze kwezviri Windows, yechikamu chayo, inzira inotanga iine zvibvumirano kana zvibvumirano nevagadziri vakasiyana iyo inoisa iyo system nekukasira uye nayo ndiyo inonyanya kuita system (ichi ndicho chinhu chikuru).
Kana iri Mac, hapana zvakawanda zvekutaura nezvazvo sezvo zvishandiso zvacho zvagara zvichiuya nehurongwa hwayo uye nekuda kwekuzivikanwa kwayakawana mumakumi emakore apfuura, saka ine huvepo hukuru kupfuura Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux yakasvika kupfuura 3% yemusika zvinoenderana StatCounter uye Net Kunyorera
Chikonzero chete nei iyo Lignux desktop isingakure ndeyekuti haina-kutanga-kuiswa mune yeruzhinji kupa.
Uye payakasvika - ngatirangarirei kubudirira kwenguva pfupi kweEee naXandros - MS yakashandisa mari zhinji pazviri ichinyangarika, vachiiisa ine vhezheni inononoka kana ichienzaniswa neMS WOS yavo.
Linux chete ine Android neChromeOS yakaramba - izvi zvinongori muUSA - izvo zvisiri lignux, nekuti zvinouya zvakafanogadzirwa.
Uye kunyangwe zvakadaro, pandakatenga HP chromebook ye € 200 muMediaMarkt, iyo ichiri kufanana nezuva rekutanga, kune vazukuru vangu avo vaisatoziva kunyora panguva iyoyo, anopesana-mutengesi akauya kwandiri kuti andiudze izvozvo "iyo" yakanga isiri komputa, seni ndaiziva, ndakamuregeredza, asi akaodza moyo ruzhinji, yaive yake - zvisiri pamutemo uye zvisina kurangwa - basa.
Aya ndiwo mashandisiro anoita MS.
Kunyangwe zvese izvi, kushandisa bhizinesi kuri kukura uye neshoko remuromo kubva kune vashandisi vetekinoroji kune vashoma-tech vashandisi vari kuita kuti ikure, kungoita nekumutsiridza michina iyo yanga ichizononoka, kana nekuve nekudzidza kubva pakumhanya kwayo uye nyore kushandisa, zviri nyore use kupfuura izvozvi MS zvishandiso, kwezuva rekushandisa
Ini ndinocherekedza iyo data yeApple quota inoda kuziva, Ivo havaise iwo anopinda ne iPhone ipapo?. Ini kunyanya handitomboziva vanhu vakati wandei vane Mac, zvichienzaniswa nevazhinji vanoshandisa Linux. Uchave mubvunzo wenzvimbo yandiri, nekuti iyo 3% yeLinux inoita senge diki kwandiri. Muchidimbu, isu tinovimba nebasa rakanaka revanhu ava.